Blog Template ​ဘယ်​လို​ပြောင်း​မ​လဲ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Blog Template ​ဘယ်​လို​ပြောင်း​မ​လဲ
​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး ​ကို​လို​ချင်​တဲ့ template ​တွေ​ကို ​လိုက်​ရှာ​လိုက်​ပါ . ​အ​ကောင်း​ဆုံး template ​ဝဘ်​ဆိုက်​လင့်​တွေ​ကို​လဲ​ပေး​ထား​ပါ​တယ် .
​နောက်​ထပ် ​ထပ်​ပြီး​သိ​ချင်​တယ်​ဆို​ရင် Google.com ​က​နေ blog templates ​ဆို​ပြီး​သာ​ရှာ​လိုက် ​တန်း​စီ​ထွက်​လာ​လိမ့်​မယ် ...
​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး ​အဲ့​ဒီ့​ဆိုက်​တွေ​က​နေ ​ကို​သ​ဘော​ကျ​တဲ့ template ​ကို Download ​ချ ​ဇစ်​ဖြေ​ထား​လိုက် .. ​ပြီး​ရင် ​ယ​ခု​လက်​ရှိ​သုံး​နေ​တဲ့ template ​ကို ​နောက်​တစ်​ခါ ​ပြန်​သုံး​ချင်​တယ်​ဆို​ရင်​တော့ ​ပုံ(၁)​မှာ​ပြ​ထား​သ​လို​မျိုး Download ​ချ​ထား​လိုက် .
​ကဲ​အို​ကေ​ပြီ​ဆို​ရင် ​အောက်​က ​အ​ဆင့်​အ​တိုင်း​လုပ်​ကြ​ရ​အောင်
(၁) Layout >> Edit Html ​ကို​သွား​ပါ .. ​ပုံ(၂) ​ကို​ကြည့်​ပါ ..
(၂) ​ပုံ(3) Browse ​က​နေ ​ဖြေ​ထား​ပြီး​သား template ​ကို ​ရွေး​ပြီး upload ​ကို​နှိပ် .
(၃) ​ပုံ(4) ​က​လို ​သူ​မေး​လာ​လိမ့်​မယ် . comfirm & save ​ကို​ရွေး​လိုက်​ပါ ..
(၄) ​ပုံ(5) ​က​လို​မျိုး ​အို​ကေ​ပြီ​ဆို​တဲ့​အ​ကြောင်း ​သ​တင်း​ကောင်း​ပါး​ပါ​လိမ့်​မယ် . ​ကဲ​သွား​ကြည့်​လိုက်​တော့ ​တန်း​ပ​လိပ်​ကို ​အ​သစ်​လေး​ပြောင်း​နေ​တာ​တွေ့​လိမ့်​မယ် .
​ကဲ​အ​ခု​ဆို​ရင် ​တန်း​ပ​လိပ်​ပြောင်း​တတ်​ပြီ​လို့​ထင်​ပါ​တယ် ..
<<<< ​ပုံ(၁) >>>>
<<<< ​ပုံ(2) >>>>
<<<< ​ပုံ(3) >>>>
<<<< ​ပုံ(4) >>>>
<<<< ​ပုံ(5) >>>>
​ဧ​ရာ​ဝ​တီ​သား July 31, 2009 at 2:45 AM
Template ​ပြောင်း​နည်း ​ကူး​သွား​ပါ​တယ်။
​ကို​ပိုး​ဟပ် December 22, 2011 at 3:09 PM
​ကျွန်​တော် ​ပြောင်း​ဖို့​အ​တွက် ​ဘယ်​မှာ​ပြောင်း​ရ​မှန်း​မ​သိ​ဘူး​အ​ကို
​ကျွန်​တော်​အ​ခု ​မှ ​စ​ပြီး​လေ့​လာ​နေ​တဲ့​သူ ​မို့​လို့​ပါ
T@N Y@W Z!N KG L@Y ! January 17, 2012 at 12:08 PM
​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​ကျွန်​တော့် ​ဘ​လော့်​ရဲ့ NAV Bar ​ကို​ဖျောက်​ချင်​တယ် . . .
​အဲ​ဒါ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ​ဆို​တာ ​ကျေး​ဇူး​ပြု​ပြီး​တော့ ​ပြော​ပေး​ပါ. . .
​သား​ငယ်(​ကံ​ပေါက်) April 12, 2012 at 6:19 PM
​ကို​ညီ ​ကူ​ညီ​ပါ​ဦး​ဗျာ ​ပြောင်း​မ​ရ​ဘူး ​ကို​ညီ​ပြ​ထား​သ​လို​လည်း​မ​ဟုတ်​ဘူး
​သား​ငယ်(​ကံ​ပေါက်) April 12, 2012 at 6:24 PM
Win Htet February 21, 2013 at 10:15 PM
​အစ်​ကို ​ဘ​လော့​ထဲ​ကို software ​တွေ ​တင်​ပေး​ချင်​ရင် ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​သ​လဲ